Thelekisa ubungakanani bamazwe-iGeofumadas
Ikhaya/Iiphotography/Thelekisa ubukhulu bamazwe
Siye sibheka kwiphepha elincomekayo kakhulu, elibizwa ngokuba istruesizeof, kuthatha iminyaka kwinethiwekhi kwaye kuyo - ngendlela edibeneyo kwaye elula-Umsebenzisi unokwenza uthelekiso lwendawo yomhlaba phakathi kwelinye okanye amazwe aliqela.
Siyaqiniseka ukuba emva kokusebenzisa esi sixhobo esisebenzisayo, baya kuba nako ukucinga okungcono kwendawo, kwaye baqinisekise ukuba amanye amazwe akangabonakali kangako njengoko iimephu zethu ziwapenda. Kwakhona, zinokuthi zibonwe njani kwiindawo ezihlukeneyo. Ulwahluko olubonakalayo phakathi kobukhulu bamazwe kule sicelo ludibaniswa nokucwangciswa Mercator Transversal Universal, amazwe asekude ukusuka e-Ecuador, aboniswa ukuba banokugqithisa ngobukhulu.
Sinika njengomzekelo ezinye uthelekiso, nto leyo iba umdla. Ukusebenzisa isicelo, ungena kwiphepha lewebhu ukusuka kwisikhangeli, kwaye emva kokubonisa umbono ophambili, igama lelizwe onokuthelekiswa nalo likwiinjini yokukhangela, ebekwe kwikona ephezulu ngasekhohlo - amagama abhalwe ngolwimi IsiNgesi-, iGreenland yakhethwa (1).
Emva kokubeka igama, i-silhouette enemibala yelizwe eliceliweyo liya kuvela kumbono (2). Emva koko, ngesikhombisi, le silhouette inokutsalwa, iye kwindawo efunekayo, kule meko, yabekwa ngaphezulu kweBrazil (3).
Kuyabonakala, njengoko ukucaciswa kuye kwaphazamisa ubungakanani beGreenland, okwenza ukuba bakholwe ukuba likhulu kuneBrazil, umzekelo. Ngeli thuluzi lewebhu elichaseneyo liye laboniswa ngokupheleleyo, imeko efanayo ifana neChanada, ubuso bayo bonke, ngokulinganayo lilingana nelinye lala mazwe angasenyakatho eMzantsi Melika.
Enye yamathuba anikezelwa kwesi sixhobo ukujikelezwa kwee-silhouettes zamazwe, ngokusebenzisa i-rose of winds, ekhoneni elingezansi elisezantsi lewebhu. Ngale ndlela, iilunettes ezifunekayo ziza kufakwa isimo esilungileyo, kwiindawo, ukuze zichonge ukuba zibandakanya konke ukongezwa kwazo
Ngoku, emva kokubona ukuba iqonga lisebenza njani, sikhethe eminye imizekelo, ukuze ubone ngokubonakalayo ukuba zinokulahlekisa njani ezinye iimephu, kuxhomekeke kuqikelelo lwekhathuni. Kananjalo kuba kunqabile ukuba kwenzeke kuthi ukuthelekisa amazwe akwimeko ezahlukeneyo; njengomzekelo, iSmartCity eyaziwayo yayo yonke iSingapore, ubungakanani bayo bunzima kummandla wedolophu yaseMadrid.
Siqala ngokuqhathanisa kakhulu phakathi kweSpeyin neVenezuela, ekuqalekeni, iSpeyin ibonakala ikhulu kuneVenezuela. Nangona kunjalo, xa ubona umfanekiso olandelayo, unokubona indlela iSpain (umbala we-orange) ifana nxamnye nomhlaba waseVenezuela (umbala ophuzi), ngaphandle kweiCanary Islands, ezafumaneka kwilizwe lasePeruvia. Ukuba sithelekisa indawo epheleleyo yomibini, ukungafani ngokungafaniyo kuya kuba yi-44%, oko kukuthi, iVenezuela inkulu kunamaxesha eSpeyin 1,5.
Phakathi kwe-Ecuador neSwitzerland umehluko ububanzi, ake sibone amatyala amabini. Ngowokuqala (1) umntu unokubona indlela i-Ecuador (umbala ohlaza) idlulayo kwandiso eSwitzerland (umbala ophuzi), kwaye iziqithi zayo ezifana neGalapagos ziya kufakwa e-Atlantic Ocean. Kwimeko yesibini (i-2), okwenza ukuthelekiswa, ngokuchaseneyo, singathi ubuncinane amaxesha e-5, intsimi yaseSwitzerland iya kungena kwindawo epheleleyo yase-Ecuador.
EColombia naseUnited Kingdom
Omnye umzekelo yiColombia kunye ne-United Kingdom, eyokuqala ukujonga-kwakunye neyokudlulileyo-, kungathiwa indawo yommandla waseUnited Kingdom yayikhulu kakhulu, ngenxa yendawo yayo (i-latitude north) kwiimephu ezihlala zihlala Sazibona esikolweni.
Kwimeko yokuqala, unokubona oko iColombia (eluhlaza), inokuthi iqule kwindawo yayo, yonke indawo yaseUnited Kingdom (umbala we-violet). Ukuze siqonde bhetele, sithatha ama-silhouettes ambalwa avela e-United Kingdom, sawabeka eColombia, kwaye umphumo kukuba ubuncinane i-4,2 yayingenza iPhabliki yaseColombia.
Iran ne Mexico
Kwimeko ye-Iran kunye neMexico, ngamazwe amabini anesiseko esifanayo, kwaye esondele kufuphi ne-Ecuador, ngokubonakalayo kwandiswa kwendawo kufana. Ngoko ke, xa senza okuthelekiswayo, akukho mfahluko omkhulu phakathi kweendawo zombini. Ukwahlula komhlaba yi-316.180 km2Awumelekanga, njengoko kwenzeka kwiimeko ezidlulileyo ngaphambili, nangona kuphela loo mmandla wohlukwano phantse kathathu indawo yaseHonduras.
Australia kunye neIndiya
Ukwahluka komhlaba phakathi kwe-Australia kunye ne-Indiya yi-4.525.610 km2, Babonise ukuba kukho umahluko omkhulu ubungakanani intsimi mazwe omabini, ukuba sibeka omnye ngaphakathi omnye, kuba waphawula ukuba umphezulu of India (blue) imele ngaphantsi kancinane kwe 50% Australia ummandla (fuchsia) ( 1).
Ubuncinane i-2,2 ngamanye amaxesha inokungena eNdiya kummandla wase-Australia, njengoko kuboniswe kumfanekiso (2).
North Korea ne-United States yaseMelika
Siyaqhubeka nokwenza uthelekiso, kule meko, abalinganiswa abaphambili yiDemocratic Republic of Korea (umbala oluhlaza), kunye nendawo esempuma ye-United States of America Ukuba sibeka ishephu kwicala lasempuma lase-US, kuyacaca ukuba iKorea yongeza indawo ubuncinci ezintathu zamazwe ayo eMantla Carolina, eSouth Carolina naseVirginia.
Iphantse ifunyanwe yiDemocratic Republic of Korea, ngokubhekiselele kwingingqi enkulu yeNorth America. Ukuba senza ukuthelekiswa okufanelekileyo, intsimi yase-US inendawo ye-9.526.468 km2, kunye neKorea 100.210 km2, oko kukuthi, sinokukufihla kuphela iUnited States xa sibeka ii-95 ngamaxesha e-Korea kuwo.
I-Vietnam ne-United States yaseMelika
Vietnam, ebubanzi kancinane Korea (ngasentla), isifaniso eyenziwe kunye United States empuma, apho ubona ukuba, ukumila kwayo evuthelweyo, ungakwazi ukuthatha inxaxheba ezininzi US States - ukusuka eWashington, ngeOregon, i-Idaho ne-Nevada ukuya eCalifornia.
Ngokuphathelele ulwalamano phakathi kokunyuselwa kwalo, singatsho oko, indawo epheleleyo yaseVietnam kufuneka iphindwe ngokuphindaphindiweyo ngamaxesha e-28, ukuba igubungele yonke indawo yase-US.
ESingapore nakwiindawo ezikude
Ekugqibeleni, elinye lamazwe aye lakhula ngokukhawuleza, kwiminyaka yakutshanje, sele ifunyenwe kude kube kutshanje njengendlela ehamba phambili yokuqonda kwihlabathi. Kulabo abangakwaziyo indawo kunye nokwandiswa kwayo, kwisephakazi laseAsia, inommandla we-721 km2.
Imifanekiso ibonisa ukufaniswa kweSingapore kunye neendawo zaseMexico zaseDexico (1), iBototá (2) iMadrid (3) kunye neCaracas (4).
Ngamafutshane, istruesizeof iyithuluzi eluncedo kakhulu, kulula ukuyisebenzisa kunye nokusebenzisana ngokukhawuleza, okunokubaluleka kakhulu kwiinjongo zokufundisa kwiinjongo ezifana neJografi okanye iZifundo zeNtlalo; kunye nenkcubeko jikelele kubo bonke.